Maxay yihiin dhirta ugu badan ee Hindiya laga isticmaalo? | Safarka Absolut
maruuzen | | Hindiya
Adduunyada udgoonku waa wacdaro. Waan jeclahay furitaanka armaajo jikadeyda iyo urinta carafyada isku dhafan ee daraasiinnada dhalooyinka ah ee aan halkaas ku hayo, laakiin waan ogahay in aan lala barbar dhigi karin dhir udgoon ugu isticmaal badan India.
Sidee udgoon u noqon karaa cunnada qoyska Hindida! Afkeygu wuxuu waraabinayaa kaliya ka fikirida midabadaas iyo uduggaas ... Ma jeceshahay kuwa cunnada Hindiga? Marka, waxaan ogaan doonaa maanta oo ah noocyada ugu isticmaalka badan Hindiya.
1 Hindiya iyo adduunkeeda udugga
4 Jilif Cassia
5 Basbaaska madow
8 Nutmeg iyo macaan
9 Abuurka iniin khardal
10 Fenugreek ama fenugreek
Hindiya iyo adduunkeeda udugga
La gastronomy Indian Waxay isticmaashaa tiro aad u badan oo dhir udgoon ah, dhulka iyo dhulka hoostiisa, kaligeed ama marka lagu daro kuwa kale, sidaa darteed mararka qaarkood waxay noqon kartaa cabsi gelin in lagu dhiirado in cunno Hindi ah lagu sameeyo guriga. Laakiin haddii aad leedahay wax yar oo tababar ah oo aad ku guuleysato inaad aqoonsato, waxaad horayba u timid waddo dheer.
Khabiiro ku takhasusay cunnada Hindida ayaa sidaa leh asal ahaan waxaa jira 11 xawaash oo si ballaaran loogu isticmaalo cunnada Hindida. Badankood waa la isticmaalaa qalalan oo la dubay si markaa ay uga soo saari karaan saliidahooda lagama maarmaanka ah intaan dhulka la dhigin oo lagu darin isku darka iyo xawaashyada kale.
In kasta oo adeegsiga madaafiicdu uu yahay mid qadiimi ah, maanta way fududahay oo waxaa lagugula talinayaa in aad u isticmaasho robotka jikada si aad uhesho shiil aad u fiican Taasi miyay dhir udgoon qaar ka mid ah yihiin, tusaale ahaan cassia bark, way adag tahay oo madaafiic ahaan way adag tahay in la shiido.
Barashada ku saabsan dhir udgoonku waa muhiim maxaa yeelay beddelka farsamadaada karinta waxay ka dhigi kartaa noocyada inay leeyihiin dhadhan ka duwan, ama si la mid ah, ku rid meel kale oo diyaarinta ah waxay leedahay saameyn kale.
Sida iska cad waxaa jira noocyo badan oo dheeri ah, 40, kaliya ma aha kow iyo toban, laakiin qaar waa dhif ama waxaa loo isticmaalaa oo keliya gobollada qaarkood, tusaale ahaan, ubaxa dhagaxa. Sidaa awgeed, waxaan xoogga saari karnaa koox-hoosaad ka kooban 24 dhir udgoon oo lama huraan ah oo ka muuqda dhammaan cunnooyinka Hindida iyo dhaqammada cunnada ee qarniyadii ugu dambeeyay, halkaasna waxaan ka samayn karnaa koox-hoosaad kale 11, ugu isticmaal badan.
hay laba nooc oo kaaraam ah ee loo isticmaalo gastronomy-ka Hindiya: cagaar iyo madow. Cagaar ayaa ugu caansan oo waxaa si aad ah loogu isticmaalaa isku darka udgoon iyo macmacaanada ugu caansan. Kareemka cagaaran wuxuu leeyahay iftiin, dhadhan macaan, oo leh qoraal eucalyptus khafiif ah. Waa la isku qasi karaa marka la sameynayo isku darka, sida masaladii garaam ee caadiga ahayd. Sidoo kale, markaad u isticmaaleyso macmacaanka iyo macmacaanka, abuurka furan waa la isticmaali karaa.
Kaararka madow waa mid aad u daran oo xoogaa qiiq ah iyo haa ama haa waa inaad u isticmaashaa si taxaddar leh. In yar oo iniino ah ayaa la isticmaalaa hadii aad u isticmaasho qafiska oo dhan waa inaad ka saartaa intaadan u adeegin saxanka maxaa yeelay hadaad qaniinto, wanaaggeygu.
Sidoo kale waa noocyo dabiici ah, oo leh hawada anise, aad looga garan karo suxuunta Hindida. Dhadhankeeda iyo udgoonkeeduba waxay ka soo baxaan saliideeda muhiimka ah ee xoogga leh, ku dhowaad dawo. Dhagaxa waa ubax oo saliidiisa la cadaadiyo lana soo saaro ka hor inta aan loo isticmaalin karinta.
Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa gebi ahaanba ama lagu qasi karaa dhir udgoon oo kale umana baahnid inaad taxaddar badan muujiso maxaa yeelay way khafiif yihiin. Cunnada caadiga ah ee loo yaqaan 'clove' waa Kerala Coconut Chicken Curry.
Waxaa sidoo kale loo yaqaan qorfe china, inkasta oo qorfe ka duwan yahay. Cassia waa ka raqiisan tahay soosaarka Dhab ahaanna, inta badan qorfaha dhulka aad ka hesho ayaa dhab ahaantii laga soo saaray jilifka cassia.
Hindidu waxay u isticmaalaan cassia halkii ay ka ahaan lahayd qorfe karinta, iyagoo ka faa'iideysanaya dhadhankeeda fudud, waxayna u adeegsanayaan tiro badan. Sidoo kale waa la isticmaali karaa hadhuudh ama dhul oo lagu daro kuwa kale. Waxay leedahay iswaafajin ka adag qorfaha wayna fududahay in la hubiyo inay cusub tahay iyo in kale: haddii aad ku xoqdo faraha dhexdooda waa inaad awood u leedahay inaad urinayso urta qorfe haddii ay cusub tahay.
Mughlai paneer curry waxaa lagu sameeyaa qolof cassia.
Waan jeclahay basbaaska madow. Waxay ku dhalatay Hindiya, oo ka yimid gobollada Malabar iyo Galbeedka Ghats. Runtu waxay tahay inay tahay uunsi taas Kharash badan ayaa ku baxa koritaankiisa maxaa yeelay waxay in badan ku tiirsan tahay dabeecadda iyo wareeggeedii. Taasi waa sababta ay u leedahay qiimayaal had iyo jeer ku kala duwan.
Basbaaska madow waa in la dubay ka hor inta aan la isticmaalin iyo had iyo jeer, waxaa fiican in hadhuudh lagu yeesho oo la shiido wax yar ka hor isticmaalka. Waxay ku fiican tahay digaagga chili Indian.
Waan jeclahay cumin, gaar ahaan marinade loogu talagalay hilibka lo'da. Kumin looga isticmaalo Hindiya gebi ahaanba ama lagu qaso dhir udgoon oo kale waxaana loo isticmaalaa in lagu siiyo dhawaaqaas qiiqa badan cuntooyin Hindi ah. Abuurkiisa waa bunni aadna u udgoon.
Way kafiican tahay in la isticmaalo kumin cusub haddii aan rabno dhadhan daran. Si fudud ayuu u gubtaa, markaa ka taxaddar marka aad dubayso. Haddii la dhaafo, kuumigu waa qadhaadh yahay. Ujeeddadu waa 30 ilbidhiqsi oo ah rootiga khafiifka ah ka dibna u oggolaanaya inuu qaboojiyo ka hor intaadan isticmaalin.
Waa mid ka mid ah noocyada ugu da'da weyn ee la yaqaan adduunka, iyada oo leh midab dahabi ah, dhadhankiisu xoogaa liito iyo xoogaa jilicsanaantiisa. Badarka koryander waxaa loo isticmaalaa inuu saldhig u yahay waxyaabo badan oo isku dar ah oo udgoon, laakiin budada koryander waa mid ka mid ah noocyada ugu isticmaalka badan ee suxuunta Hindida.
Sida xaalada kuumin, waa inaad wax yar dubtaa ilaa bunni dahabi ah iniinyahana waxay bilaabaan inay wax yar ku boodaan digsiga. Digaagga Tikka Masala waa nooc.
Nutmeg iyo macaan
Labadaba waxaa si weyn loogu isticmaalaa gaashanka Indian. Nowska cusub ayaa loo shaqeynayaa si looga saaro banaanka oo looga saaro lakabka. Dusha adag ee daboolaya iniinaha ayaa jabi kara ka hor shabagyada oo noqda macaan. Taasi waa, haweenku waa qolofka lowska.
Markay qallajiso, waxay helaysaa hooska u dhexeeya dahabka iyo oranjiga waxayna ku dartaa dhadhan diiran oo siman diyaarinta. Dhanka kale, marka lowska qallalan yahay waqti dheer ayuu qaadanayaa sidaa darteed had iyo jeer waxaa lagugula talinayaa inaad ku iibsato hadhuudh oo aad si toos ah ugu xoqdo saxanka ama diyaarinta.
Waa dhif iyo naadir in la isticmaalo lowska marka hore la shiiday maxaa yeelay mar haddii la shiido wuu lumiyaa xoogiisa, haddaba waa maxay sababta? Hilibka leh curry massaman wuxuu leeyahay lowska.
Abuurka iniin khardal
Abuurku wuxuu noqon karaa madow, bunni ama jaalle waxaana aad looga ganacsadaa cunnada Hindida. Abuurku wuxuu bixiyaa dhadhankiisa markay dhulka ku shiidaan ama saliidda lagu kariyo. Waxay u dhadhamayaan sida sigaar cabbid iyo inbadan ayaa loo isticmaalaa curry iyo budada curry.
Sidoo kale, saliida iniin khardal le'eg ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa cunnooyinka Waqooyiga Hindiya.
Fenugreek ama fenugreek
Waa noocyada kama maqna Madras budada curry. Waxay caan ku tahay udgoonkeeda iyo dhadhankeeda. Abuurka geedkaani waa midab huruud ah oo qalalan waxaana loo isticmaalaa sida uunsi, badanaa loo yaqaan kasurimethi.
Abuurku aad ayuu u kacsan yahay sidaa darteed waa inaad ka taxaddartaa isticmaalkooda, sida xinjirta oo kale. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa dawooyinka dhaqanka iyo sharoobada maple been abuurka ah ee laga helo Hindiya.
Aad ugu badan Hindiya, waxaa loo isticmaali karaa mid cusub ama la qalajiyey. Waxay leedahay faa'iidooyin caafimaad oo badan iyo loo isticmaalay curry iyo waxyaabo badan oo isku dhafan oo udgoon. Waxay leedahay dhadhan ka xoog badan cusub oo qalalan iyo wasakh ku filan, sidaa darteed waa inaad ka taxaddartaa markaad wax qabanayso.
Waxay leedahay udgoon udgoon, udgoon carbeed waxaana loo isticmaalaa qadar yar si loo siiyo curry midabkooda dahabka ee hodanka ah Ukunta Bhruji waxay leeyihiin diirkeed.
Waxaan horey u ogaanay, waa noocyada ugu qaalisan adduunka. Way ka qiimo badan tahay dahab miisaankiisa haddii aad isweydiineysana sababta, waa sababta oo ah waxay u baahan tahay shaqo badan in la soo saaro. Saffron oo ku saabsan ceebaynta ubaxyada safreenka waana in lagu koriyo gacanta.
Safrinka ugu fiican waa casaan qoto dheer waxayna ka timaadaa Spain, Iran ama Kashmir. Waa ka qabow yahay, waa sii qoto dheer tahay midabka casaanka ah. Waxay leedahay dhadhan gaar ah, laakiin udgoonku way ku kala duwan yihiin hadba sanka mid kasta. Qaarkood waa wax ubax ah, qaarna waxay leeyihiin tilmaamo malab ah ... Sikastaba, safarku waa mid kacsan waxaana loo isticmaalaa inyar. guud ahaan waxay ku milmaan marka hore biyo ama caano.
Miyaad ku dhiirrataa inaad ku ciyaarto kuwan dhir udgoon Hindi jikadaada?
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Maxay yihiin dhirta ugu badan ee Hindiya laga isticmaalo?